Abarhwebi bearhente eTrntnton, eColorado
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Isiqondisi seArhente yeZindlu Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi Colorado Thornton
I-1-1 yoluhlu lwe-1
Ubunono, iiarhente zeNdawo
I-IQC yeKhaya yeeNdawo zeeNdawo ekuHlalweni kuzo izindlu zintsapho zinikezela ngobungcali bezindlu kunye neenkonzo ezingalinganiyo. Ukusuka ngokunceda ekufumaneni ikhaya lakho elitsha ekuphepheni ngokupheleleyo ikhaya ukuze ulithengise, siyahamba imayile eyongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba iimfuno zakho ziyafezekiswa. Unomdla kwi-BUYING, KUTENGELWA, okanye kwi-FL ...
umbono Abarhwebi bezindlu kunye nabarhwebi ishicilelwe I-2 iminyaka edlulileyo
A umrhwebi wokuthengisa izindlu nomhlaba okanye umthengisi wentengiso yendawo ethengisa izindlu nomhlaba (odla ngokubizwa ngokuba yiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba) ngumntu osebenza njengomlamli phakathi kwabathengisi kunye nabathengi bepropathi yendawo ethengisa izindlu nomhlaba kunye nokuzama ukuthelekisa abathengisi abanqwenela ukuthenga kunye nabathengi abanqwenela ukuthenga. E-United States, ubudlelwane babusekwe okokuqala ngokubhekisele kumthetho wesiNgesi oqhelekileyo we-arhente, kunye nomrhwebi onobuhlobo bokuthembana nabathengi bakhe. Umthengisi wokuthengisa izindlu nomhlaba ufumana intlawulo ebizwa ngokuba yikhomishini yokudibanisa ngempumelelo indawo yomthengisi kunye nomthengi onokuthi uthengise. Le khomishini ingahlula-hlulwa kunye nabanye abarhwebi bezindlu okanye iiarhente ezithatha inxaxheba xa kufanelekile. Umenzeli wezindlu, igama elisetyenziswa e-United Kingdom, ngumntu okanye ishishini elineshishini lakhe lokuthengisa iipropathi endaweni yokuthengisela abathengi. Kukho umahluko obonakalayo phakathi kwezenzo, amagunya, izibophelelo kunye neemfanelo zabarhwebi kunye neearhente zepropathi kwilizwe ngalinye. Amanye amazwe athatha iindlela ezahlukileyo zokuthengisa kunye nokuthengisa iipropathi yenyani. E-United States, nangona kunjalo, abarhwebi bezindlu kunye nabathengisi babo banceda abanini ukuthengisa, ukuthengisa, okanye ukurentisa iipropathi zihlala zibizwa ngokuba "kuluhlu lwabarhwebi" kunye "nabameli bokudweliswa."  Uluhlu lwabarhwebi kunye neearhente zifuna ukuthengisa kunye nokuthengisa okanye ukuqeshisa iipropathi ngexabiso elifikelelekayo phantsi kwamagama afumanekayo. Abanye abathengisi kunye neearhente banokugxila ekumeleni abathengi okanye abaqashi. Nangona kunjalo, ukunikwa ilayisenisi njengomthengisi okanye umthengisi kugunyazisa umntu onikwe ilayisenisi ukuba abamele amaqela kwelinye icala lolawulo. Ukukhetha kweliphi icala ukumela isigqibo seshishini somnini layisenisi.
I-Thornton okanye eyahlukileyo, inokubhekisa ku: